La ngamaxwebhu amabini amatsha aza kuqala kwi-Apple TV + | Ndisuka mac
La ngamaxwebhu amabini amatsha aza kuqala kwi-Apple TV +
Kwakhona, kufuneka sithethe ngamaxwebhu afunwa nguApple Yandisa ukunikezelwa kwenkonzo yakho yokusasaza ividiyo, apho sinokufumana khona uthotho, iimuvi kunye neenkqubo zikamabonwakude. Inkampani esekwe e-Cupertino igunyazise amaxwebhu amabini amatsha agxile ekubonakaliseni impumelelo eyenziwe kumzi-bhanyabhanya ngamadoda nabafazi abamnyama.
Ngokukodwa La ngamaxwebhu amabini. Kwelinye icala sifumana Inombolo yokuqala kwiphepha lokufowuna: Abafazi abaMnyama abaPhambili eHollywood kwaye kwelinye Inombolo yokuqala kwiphepha lokufowuna: Amadoda aMnyama aPhambili eHollywood. Uxwebhu ngalunye lubalaselisa indima yabasetyhini kunye neyamadoda ngokuzimeleyo kwimveliso yefilimu.
Inombolo yokuqala kwiphepha lokufowuna: Abafazi abaMnyama abaPhambili eHollywood Iya kugxila kwabasetyhini (njengoko isihloko sibonisa). Imveliso yolawulo inikezelwa yi U-Angela Bassett ophumelele u-Oscar kunye no-Halle Berry ophumelele u-Oscar.
Olu xwebhu luza kuba Ekhokelwa nguShola Lynch apho umsebenzi oqhekezayo wabadlali abamnyama bexesha elidlulileyo owavula indlela kaBassett, uBerry nabanye abaninzi "uphononongwa kwaye wabalaseliswa."
Uxwebhu lwesibini, Inombolo yokuqala kwiphepha lokufowuna: Amadoda aMnyama aPhambili eHollywood, kwaye iya kulandela umbono omnye ngaphezu kwexesha langaphambili elibonisa "amabali kunye namava abadlali abesilisa abamnyama abadlulileyo abaye bavula indlela yeFoxx, iHart kunye nabanye."
Olunye uxwebhu iveliswe nguJamie Foxx Kwaye uKevin Hart uya kulawulwa ngu-Hollywood Academy ophumelele u-Oscar uReginald Hudlin.
Kwimeko yamaxwebhu amabini asandula ukuthunyelwa ngu-Apple, basekwinqanaba labo lokuqalaKe isaza kuthatha iinyanga ezimbalwa ukwaziswa kwenkonzo ye-Apple yokusasaza ividiyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » La ngamaxwebhu amabini amatsha aza kuqala kwi-Apple TV +
I-Nomad yehlisa intambo ehambelana ne-AirTag kwiiglasi zakho kunye nesitshixo